Ilaahey wakiil ka socda oo carabi kaliya ku hadla miyuu u baahan yahay? – Kaasho Maanka
Haddaan ka yeelo kitaabka quraanka luuqad ajanabi ah waxay dhihi lahaayeen maxaa loo caddayn waayey aayaadkiisa, ma (Quraan) ajanabi ah iyo nabi (Carabi ah), waxaad dhahdaa isagu kuwa rumeeyey wuxuu u yahay hanuun iyo caafimaad, kuwa aan rumeynina dhagahooda waxaa ah culays, waana ka indha la’ yihiin kuwaasna waxaa looga yeeri meel fog – Fussilat:44
Annagaana soo dejinay isagoo quraan carabi ah inaad kastaan – Yuusuf:12
Annagaa ka yeelnay Quraan carabi ku soo dagay, inaad kastaan darteed. – Az-Zukhruf:03
Rasuul kuma dirno waxaan afka qoomkiisa ahayn si uu ugu caddeeyo, wuuna baadiyeeyaa Eebbe cidduu doono inta xaqa loo caddeeyey ka dib, wuuna hanuunin cidduu doono, waana adkaade falsan. – Ibraahim:14
Ilaahey hadii uu gumeyste raba in ay dadku caabudaan ahaan lahaa sida Maxamad noo sheegay, ilaahey ma dirsan laheyn nin wakiil u ah oo carab ah af carabi kaliyana ku hadla. Aayaddaan kore waxay leedahay ilaahey quraanka wuxuu carabi uga dhigay inaad kastaan daraadeed. Maxamad in uu been noo sheegayo waxaa lagu garan karaa adduunka waxaa ka jira lix kun oo luuqadood (6,000), maadaama ay dadka adduunka oo dhan aysan carabi ku hadlin, ilaahey ma caqliguu la’ayahay markuu leeyahay Quraanka carabi ayaan ku soo dajiyay sidaad u kastaan darteed. Ma dadka oo dhan baa carabi fahmaya mase ilaahey carabta kaliya ayuu u soo dajiyay quraanka? Marka taas micnaheedu waxay tahay ilaahey wuxuu rabaa kaliya in ay carabta caabudaan maadaama ay fahmayaan wakiilkiisa oo ah Maxamad sida uu aayadaas ku sheegayna uu quraanka carabi ku soo dajiyay si ay dadka carabta ah u fahmaan. Ilaahey haddii uu rabo in ay dadka oo dhan caabudaan muxuu u soo dirsaday wakiil carabi kaliya ku yaqaan, muxuuna u leeyahay quraanka waxaan ku soo dajiyay carabi si aad u kastaan daraadeed?
Ma og tahay in nimankaan sheegta nabinimada iyo in ilaahey soo dirsadey badankoodu bariga dhexe (Middle East) kawada yimaadeen? sida nabi ibraahiim, ciise, maxamad iyo dhammaan nabiyada kale ee quraanka lagu sheegay? Haddii uu ilaahey dooni lahaa in ay dadka oo dhan caabudaan muxuu ilaahey nabiyadiisa oo dhan bariga dhexe ugu diray? Adduunka oo dhan ma bariga dhexe baa mise ilaahey wuxuu jecel yahay dadka bariga dhexe kaliya oo rabaa inuu cadaab ka bad-baadiyo? Diimaha Ibraahiimiyada loogu yeero ee kala ah Kirishtaanka, Yuhuudda iyo Islaamku waxay ka yimaadeen bariga dhexe, taas waxay ku tuseysaa in nimankaan isku sheega in ay wakiil ka yihiin awood sare ay isku daydeen oo oo quraafaadka iyo sheekooyinka kala min-guuriyeen sababtoo ah ma jirto sabab caqli gal ah oo ka danbaysa in hal tuulo toban nabi laga soo saaro, ama qoys dhan wada nabiyo noqdaan halka kownka intiisa kale ayna fikrad yar ka haysan nabinimada, waligoodna maqal cid sheegtay inay wakiil ka tahay awood xagga sare deggan.
Sxb bayaal anigu mudo 10sano ah ayaan baadhayay diimahan adunka ee kala duwan midwaliba uhaysto inay sax tahay imika bal muxuu carbi ka garan ninka Japan ama Canada bal kawaran ninkaa aakhiro marka layidhaahdo maxaad nabi maxamed urumayn wayday ee naarta dalaq lasiiyo miyaanay nasiib daro ahayn inayu si kale u dhigno bal kawaran ninka somaliga ah ee iska xoolo dhaqatada ah ee aakhiro markii latago layidhaahdo diinta saxda ahi waxay ahayd Budhiisam adiguna waad gees martay diintii ilaahayna ma aqbalo waxaan iyada ahayn gal naarta miyaanay ninkaa nasiib daro ku dhicin jawaabtu waa haa hadaba dadka maanta adunka kunool… Akhri faalladan »
Reply to Ninka rumaysan Allah lkn maxamed diidan
Waad mahadsan tahay sxb, wax badan oo run ah ayaad iftiimisya. Waxaan u rajaynayaa in safarkaaga baaritaanka xaqiiqadana guul
Waxan donaya inaan faaloyin kuso gudbisto website kan anigu waxan ahay deism
Waa soo dhawaynayaa walaal faallooyinkaaga, sidoo kale haddii aad jeceshahay inaad qoraalo ku daabacdo halkan Email-kan ayad ku soo diri kartaa kaashomaanka@gmail.com
Xilli kasta, meelkasta iyo cid kasta waa ku khalad in la aamino waxaan caddayn ku filan loo hayn. W. K. Clifford (1879) Nolosheena haddaynu nahay noolaha loo yaqaan aadanaha waxyaabo badan ayaa saamayn wayn ku leh si aan usii jirno ama u noolaano waxaana dhacda badankooda aynu garanayno sababta uu jiritaankeenu ugu xidhan yahay sida Hawada, Biyaha, galmada iyo qaar kaloo badan. laakiin waxa jira...
iinta Islaamku waa diinta labaad ee ugu dadka badan, waxa haysta dad ka badan 1.7 bilyan oo qof. Haddaba qormadeenan kooban waxa aynu ku eegaynaa diinta Islaamka iyo sida ay xaquuqda bin’aadamka ku tahay? siiba ta dumarka? marar badan waxa ay muslimiintu ku doodaan in diintoodu ay tahay diin nabadeed iyo sidoo kale in ay tahay diin dumarka u caddaalad fashay, dulmi iyo xaqdarrona ka...
Akhri Qormadan6 Faallo
Shaydaanku waxyaalaha uu ka shaqeeyey waxaa ka mid ah in aan xaddiiska la qorin xilligii ay noolaayeen asaxaabtii nebi Maxamed. Sida la og yahay waxaa quraanka la ururiyey oo la diiwaan geliyey markii laga joogey dhawr iyo toban sano keli ah geeridii nebiga, waxaana go’aankii ugu danbeeyey ee musxafka lagu qoray lahaa Cismaan Cafaan oo ahaa amiirkii saddexaad oo talada qabtay nebiga ka dib. Waxaa...
W/Q: Khaled Hassan 16th February 2019